Golaha Ammaanka oo ka arrinsaday xaaladda Somaliya | Dhacdo
Home Wararka Maanta Golaha Ammaanka oo ka arrinsaday xaaladda Somaliya
Golaha Ammaanka oo ka arrinsaday xaaladda Somaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Jimcihii ku booriyay dowladda Soomaaliya in ay abaabusho doorashooyin “aan dib u dhac lahayn”, qaraar uu goluhu hoosta kaga xarriiqay halista amni ee dalka uga imaaneysa Al-Shabaab iyo kooxaha hubeysan.
Sida ay qortay wakaaladda wararka AP, qaraarka oo si wadajir ah la isugu raacay ayaa u fasaxay Midowga Africa in ciidamada ku dhow 20-ka kun ay sii joogaan Soomaaliya illaa dhammaadka sanadka, iyadoo loo igmaday yareynta khatarta kooxaha xagjirka ah si loo suurtageliyo “xasilooni, federaal, madax-bannaani iyo midnimada Soomaaliya.”
Golahan oo ah unugga ugu awooda badan Q.M. ayaa sheegay in ujeedku yahay in amniga lagu wareejiyo maamullada Soomaalida, iyadoo qorshuhu yahay in sanadkan 2021-ka ay Soomaaliya la wareegto hoggaaminta howlaha amniga, ayna si buuxda mas’uuliyaddaas u qaadato dhammaadka sanadka 2023-ka.
Golaha ayaa xoojiyay muhiimadda ay leedahay in la dhiso awoodda ciidamada Soomaaliyeed iyo hay’adaha dalka si ay awood ugu yeeshaan maareynta khataraha imminka jira iyo kuwa mustaqbalka, iyadoo ciidamada Midowga Africa, ee AMISOM loo oggolaaday in ay gacan ka geystaan in ay waajibaadkooda amni ku wareejiyaan dowladda Soomaaliya.
Ansixinta qaraarkan ayaa imanaya iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska saaran madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ka dib markii ay qabashada doorashada dib uga dhacday 8-da February, heshiis la, aan ku saabsan habka doorashada loo qabanayo awgeed. Laba dowlad goboleed ayaa sheegay in aysan ka qeyb galeynin doorasho aan laga heshiin.
Dadka dhaleeceeya ayaa ku eedeynaya madaxweynaha, oo markii labaad raadinaya muddo xileed afar sano ah, in uu dib u dhigay doorashada si uu u kordhiyo muddo xileedkiisa. Madaxweynaha ayaa eedda saaray faragelin ka imanaysa shisheeye uusan carabaabin.
Golaha Ammaanka ayaa walaac ka muujiyay dib u dhaca ku yimid dhameystirka hannaanka doorashooyinka sanadkan. Waxa uu ku booriyay dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada “in ay abaabulaan doorashooyin xor ah, caddaalad ah, lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay” iyadoo la raacayo qodobada heshiiskii 17- kii September 2020.
Golaha Ammaanka ayaa soo dhoweeyay “horumarka illaa iyo hadda la sameeyay” laakiin waxa kaloo uu carrabka ku adkeeyay khatarta degdegga ah ee ka imanaysa Al-Shabab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah.
Xubnaha Golaha ayaa soo dhoweeyay sida ay dowladda uga go’an tahay in ay si wadajir ah ula howlgasho AMISOM “si ay u noqoto hoggaanka howlaha amniga ee Soomaaliya.”
Laakin bey yiraahdeen “Soomaaliya wali awood uma lahan in ay mas’uuliyad buuxda iska saarto amnigeeda iyo in la wiiqo Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubeysan iyo dhisidda nabad waartaba ay u baahan yihiin iskaashi joogto ah oo goboleed iyo mid caalami ah.”
Previous articleItoobiya oo si kulul ugu jawaabtay Mareykanka
Next articleMadaxweynaha Puntland oo gaaray Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)